कहाँ चुक्यो नेकपाको बहुमत पक्ष? - Nepal Readers
कहाँ चुक्यो नेकपाको बहुमत पक्ष?
अहिले भएको संसद विघटन ०५२ मा मनमोहन अधिकारीले गर्नुभएजस्तो नभएर ०५१ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्नुभएजस्तो हो भन्ने बुझाई स्थापित गरेर विघटन सदर गर्ने नियतबारे चर्चा भइरहेको छ ।
०४७ को संविधानमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारकै रुपमा संसद विघटन गर्ने व्यवस्था थियो । त्यसमाथि त्यसबेलाको संसदमा गिरिजा बहुमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । तर, मनमोहन अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । सर्वोच्च अदालतले ०५२ भदौ १२ मा ‘अल्पमतको प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गरेको’ नाममा त्यसलाई सदर गरेन, संसद व्युँतियो ।
गिरिजाको पालामा वैकल्पिक सरकार बन्न सक्ने अवस्था छैन भनेर व्याख्या गरियो । अहिले केपी ओली त्यही व्याख्याको सहारा लिँदै आफूलाई ६४ प्रतिशतको प्रधानमन्त्री भन्दै हुनुहुन्छ । फरक के छ भने, अहिलेको संविधानले सरकार बनाइरहनु पर्ने कुरालाई जोड दिएको छ । तर, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ भन्ने अनुमान यो संविधानले गरेको थिएन ।
फेरि प्रचण्ड–माधव समूहले समयमै बुझ्न नसकेको कुरा के हो भने, प्रधानमन्त्री संसदीय दलले बनाउने हो, पार्टीको कमिटीले होइन । केपी ओलीलाई सांसद र पार्टी सदस्यबाट कारवाही गरिएको थिएन । संसद बैठक बोलाउनका लागि सांसदहरूले राष्ट्रपतिमा समावेदन चढाउनै पर्ने थिएन । संसद जीवित भएकै अवस्थामा संसदीय दलको बैठक बोलाएर त्यहाँबाट बहुमतले दलको नेता फेरिदिएको भए उतिबेलै एउटा निकासमा मुलुक जान्थ्यो । त्यसैले कानुनविद्हरू भन्दै छन्, ‘अहिले पनि अदालतले ‘अर्को सरकार बन्न सक्ने उपधारामा जाऊ’ भन्न सक्छ ।’